သင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွင် Apple Watch ဖန်သားပြင်ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ ငါက Mac ကပါ
သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများတွင် Apple Watch ဖန်သားပြင်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
အသုံးချ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 11/10/2019 14:22 | Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, လဲ tutorial
အရောင်းရဆုံးနေရာများနှင့်တစ်ခု၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ၎င်းသည်အာရုံခံကိရိယာများမှတစ်ဆင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရန်နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်အားကစားကဏ္inတွင်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ Apple Watch ဖန်သားပြင်ကိုပိတ်ထားမည် ပြီးတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့လမ်းဟာအမြဲတမ်းအရမ်းရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်တယ်။
သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို Apple Watch နဲ့ဘာမှမရပ်တန့်ပါစေနဲ့
ချွေးတစ်စက်၊ ပြန်တက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဖြီးခြင်းတို့သည်၎င်းအားခြေရာခံမိစေနိုင်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ သင်၏လေ့ကျင့်ခန်း (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းများ၊ နှလုံးခုန်နှုန်း) ကိုစောစီးစွာပြီးအောင်လုပ်ရန်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ကြီးလေးသည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဤသို့မဖြစ်စေရန်သင်သည်နာရီမျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဤနည်းဖြင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုသင့်လျော်စွာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ကျနော်တို့ function ကိုသစ်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် အင်အားစု Touch ကို သောကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းသစ်။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်တွင်လေ့ကျင့်ရေးအက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစတင်ပါ။ ထိုနေရာမှမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခိုင်မြဲစွာ နှိပ်၍ သော့ခတ် option ကိုနှိပ်ပါ။ အဆင်သင့်! ယခုသင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုကိုသင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲစတင်နိုင်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရပ်တန့်။
မျက်နှာပြင်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်၊ စစ်ဆင်ရေးကိုပြန်လုပ်ပါ - မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခိုင်မြဲစွာ နှိပ်၍ "သော့ဖွင့်ခြင်း" ကိုနှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်ပိတ်နေစဉ်သင်နှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အဲဒါကိုသော့ဖွင့်ဖို့မှလွဲ။
အာ့ ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Podcast ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ !!!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများတွင် Apple Watch ဖန်သားပြင်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
Apple Store ၀ န်ထမ်းများအတွက်ယူနီဖောင်းအသစ်
Sharp ၏ LCD ဌာနသည် Apple ၏ရန်ပုံငွေဖြင့် Foxconn ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်